लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्छ ‘डा. बाबुराम भट्टराई र पशुपतिशमशेर’ विजयी उम्मेदवार
प्रकाशित: २०७४ कार्तिक २७
कार्तिक २७ । बाम गठबन्धनबाट अल्लगिए पछि कांग्रेसको शरण पुगेका डा. बाबुराम भट्टराई र पशुपतिशमशेर राणा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट दुवै विजयी हुने नेपाली कांग्रेसले दावी गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय निर्वाचन परिचालन समितिले लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उमेदवार बनेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. भट्टराई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी हुने दावी गरेको हो ।
काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट भट्टराई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि गोर्खा क्षेत्र नम्बर १ बाट र राणा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । दुवै उम्मेदवार विजयी हुने काँग्रेस केन्द्रिय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाँडले दावी गरेका छन्
उनले सोमबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी मंसीर १० गते पहिलो चरणमा हुने निर्वाचन प्रचार अभियानमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरिएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली काँग्रेसले पहिलो चरणमा प्रतिनिधि सभाका लागि ३५ जना र प्रदेश सभाका लागि ६६ जना उम्मेदवारी दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले मतदान बदर हुन नदिन सचेत रहन पनि आम मतदातालाई आह्वान गरेको छ । संयोजक खाँडले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि मतपत्र बदर हुन नदिन पार्टीले आम मतदातालाई सचेत रहन आग्रह गरेको स्पष्ट पारेका छन् । काँग्रेसले मतदान बदर हुन नदिन देशभर मतदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेको पनि जनाएको छ ।